UKUSETYENZISWA KWAMAYEZA AMAHIBISCUS AMAGQABI- PAMPEREDPEOPLENY.COM - IMPILO
Ukusetyenziswa kwamayeza kweHibiscus Amagqabi
Iindaba Iziphumo zokugqibela ze-UPSC ESE 2020 zibhengeziwe
Iimuvi UShaadi Mubarak Ugqirha woVavanyo lweManav Gohil Uvavanyo oluLungileyo kwi-COVID-19 yaBenzi abaSebenzela kwiiNdlela ezimbalwa ezifanayo
EzeMali Ulwahlulo oluphezulu lweeNtengiso zinokungabi kukhetho olufanelekileyo: Nasi isizathu
Itekhnoloji I-OneWeb Signs MoU kunye noRhulumente waseKazakhstan ukuBonelela ngeeNkonzo zeBroadband
Imidlalo IPL 2021: USangakkara uyasixhasa isigqibo sikaSamson sokugcina isitrayikhi kwibhola yokugqibela
Ekhaya Impilo Impilo-ntle Abasebenzi bezeMpilo ngu- UMadhu Babu | Ipapashwe: ngolwesibini, Novemba 5, 2013, 1:04 [IST]
IHibiscus sisityalo esihle esidubula iintyatyambo esikhula kwimimandla yetropiki neshushu. Inentyatyambo entle ngokukhethekileyo kwiintlobo ngeentlobo zeentlobo zayo. Intyatyambo yesizwe yaseMzantsi Korea, iMalaysia kunye neRiphabhlikhi yaseHaiti. Kuthathelwa ingqalelo njengentyatyambo entle eIndiya, isetyenziswa kwizithethe ezininzi kunye nokunikela kuThixo. Ngaphandle koku, zininzi iindlela zokusebenzisa amayeza e-Hibiscus kunye neentyatyambo. Kwinkqubo yamandulo yamayeza aseIndiya eAyurveda, ibisetyenziselwa ukunyanga izifo kunye neemeko kangangeenkulungwane.
Ukusetyenziswa kwamagqabi e-Hibiscus akusetyenziswanga amayeza kuphela, ayasetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo kwaye amaxesha amaninzi asetyenziswa njengeminikelo yokuhombisa kunye nokulungiswa komhlaba ngokubanzi kwiigadi kunye neepaki. Amagqabi e-Hibiscus aqhutywa ngeendlela ezahlukeneyo ngokusetyenziswa okwahlukileyo. Amagqabi e-Hibiscus omileyo asetyenziswa njengokuhombisa kwiivenkile ezahlukeneyo ezifana neMexico. Intyatyambo yayo isetyenziselwa ukwenza uhlobo lweti ethandwayo kumazwe aliqela anamagama ahlukeneyo.
Ukusetyenziswa kwamayeza amagqabi eHibiscus kubonakalisiwe ngokwenzululwazi ngophando olwahlukeneyo. Uphononongo luka-2008 lubonakalisile ukuba ukusebenzisa i-hibiscus tea kunciphisa uxinzelelo lwegazi. Kwi-Ayurveda, i-Hibiscus ebomvu nemhlophe ithathwa njengexabiso eliphezulu kunyango kwaye isetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo ukunyanga ukukhohlela, ukulahleka kweenwele kunye nokwenza ngwevu. Ikwacebile kwi-antioxidants esetyenziselwa iinjongo zokulwa ukuguga. Iti yegqabi le-hibiscus nayo iyatyiwa ukuphakamisa imeko.
Nazi iindlela ezininzi zokusetyenziswa kwamagqabi eHibiscus.
Cola eyenziwe ngamagqabi e-hibiscus atyumkileyo kunye neentyatyambo zentyatyambo zisetyenziswa njengesixhobo sokulungisa iinwele. Kuyaziwa ukuba mnyama umbala weenwele kwaye kunciphise inkwethu xa usetyenziswa emva kwethambeka.
Iti eyenziwe ngamagqabi e-hibiscus ithandwa kakhulu kumazwe ahlukeneyo ngenxa yokusebenzisa kwawo amayeza. Ityiwa ngaphandle kweswekile ukunceda njenge-diuretic yendalo kubantu abaneengxaki zezintso kunye nokuphakamisa imeko yoxinzelelo ngexesha loxinzelelo.
Ineempawu ezisetyenziselwa ukhathalelo lolusu lwezithambiso. Kumayeza emveli amaTshayina, iHibiscus ishiya isicatshulwa isetyenziswa njenge-arhente elwa ne-solar ngokufunxa imitha ye-UV kunye nokunyanga iimeko zolusu ezininzi njengemibimbi njl njl.
Yehlisa uxinzelelo lwegazi
Izifundo malunga nokusetyenziswa kweti yegqabi le-hibiscus zibonakalise ukunciphisa uxinzelelo lwegazi kubantu abaninzi abanengxaki yoxinzelelo lwegazi. Yiyo loo nto kucetyiswa ukuba utye rhoqo ukunciphisa uxinzelelo lwegazi.
Ukukhutshwa kweoyile ye-hibiscus kusetyenziselwa ukufaka amanxeba avulekileyo kunye namanxeba abangelwa ngumhlaza. Kuyanceda kwinqanaba lokuqala lomhlaza. Kuyanceda ukuvula amanxeba ngokukhawuleza.
Iti yegqabi leHibiscus isebenza kakhulu ekwehliseni amanqanaba e-cholesterol ye-LDL. Umxholo wayo unceda ekuthinteleni ukwakhiwa kweplaque ngaphakathi kwimithambo, ngaloo ndlela kunciphisa amanqanaba akho e-cholesterol.
Khohlela kwaye kuyabanda
Amagqabi e-Hibiscus aqukethe iVitamin C eninzi ethi xa isetyenziswe ngohlobo lweti kunye nezinye izicatshulwa inceda ukwakha ukungakhuseleki kubanda nokukhohlela okuqhelekileyo. Kuya kukunceda ukuba ugqithe kwindawo yakho ebandayo ngokukhawuleza.
Ukuthoba umzimba kunye nokwetyisa
Isebenza njengokunciphisa ukutya ukutya kwendalo, ukunceda ekunciphiseni ukutya. Ukutya iti yegqabi leHibiscus kunceda ukuba utye kancinci kwaye ukwetyise ukutya ngokufanelekileyo ukunciphisa ukunciphisa amanqatha angafunekiyo emzimbeni wakho.
Ukuhamba kwexesha rhoqo
Ukusetyenziswa rhoqo kweti yeHibiscus yegqabi kunceda abasetyhini kumanqanaba okwehlisa i-estrogen emzimbeni. Oku kunceda umzimba ukuba ugcine inqanaba elifanelekileyo lehomoni ukunceda ekulawuleni umjikelo ofanelekileyo wokuya exesheni.
Amagqabi e-Hibiscus atyebile kwii-antioxidants ezininzi. Ezi zinceda ekupheliseni uninzi lweeradicals zasimahla ezikhoyo emzimbeni wakho ngaloo ndlela ziyicothisa inkqubo yokuguga kwaye kwezinye iimeko zandisa ubomi.
Umbongo kwi-lala lajpat rai kwi-hindi
indlela yokufumana iinwele ezigudileyo nezimenyezelayo
Imiyalezo yeminyaka engama-25 isibini esitshatileyo
indlela yokuhamba ngeenyawo ekhaya ngokwendalo
Ngaba ilungile ukunciphisa umzimba
indlela yokususa iinwele zobuso ngokwendalo ngokusisigxina